Publié juin 21, 2019 par Book News
Tsy ampy sady marefo ny fahaizan’ny tanora ny fampiasana ny teny malagasy. Anisan’ny mamotika izany ny fampiasana ny fahafohizan-teny sy teny mifangaro any amin’ny aterineto sy ireo tambazotran-tserasera samihafa. Misy anefa ireo blaogy sy vondrona manitsy ireo tsipelina ary manoro ny fampiasana ny teny malagasy araka ny tokony ho izy. Misy ihany koa ny vina fanokafana tranokala ho fampiroboroboana ny teny malagasy amin’ny aterineto.
Tsy ampy ny fampiasana ny teny malagasy amin’ny aterineto
« Mbola vitsy ny mampiasa ny teny malagasy any amin’ny aterineto », hoy Rasolondraibe Ando Nantenaina, mpitantana ny Blaogin’i Voniary sady mpikarakara ny hetsika, Ny teny malagasy any amin’ny aterineto, ny Alarobia 19 jona lasa teo tao amin’Ivotoeran’ny Kolontsaina Malagasy (IKM) Antsahavola, izay tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny iray volan’ny teny malagasy.
Nambarany tamin’izany fa ny aterineto dia varavarana iray idiran’ny fanatontoloana ka isika malagasy dia mijanona ho mpandray hatrany ireo vokatra avy amin’izany toy ny ara-barotra sy ara-kolontsaina.
Rasolondraibe Ando Nantenaina, mpikarakara ny hetsika “Teny gasy 2.0” sady mpitantana ny Blaogin’i Voniary . cc : Henintsoa Hani
Ao ihany koa hoy hatrany ity mpitantana blaogy ity ny fandisoan-teny sy fampiasana ny fanafohizan-teny toy ny « c, q, x » ary ny fampiasana ny teny mifangaro.
Noho izany, hita taratra fa mihamarefo ny fahaizan’ny tanora mampiasa sy manoratra ny teny malagasy amin’ny fampiasana ny aterneto sy ny tamba-jotra serasera maro samihafa.
Izany indrindra no nahatonga an’ity hetsika ity hoy ny mpikarakara, mba ho fanentanana sy fampiroboroboana ny teny malagasy. Entina anehoana ihany koa, hoy izy fa velona ny teny any amin’ny aterineto ary misy ireo mpisehatra mampiasa izany. Namafisiny tamin’izany fa misy ny famokarana lahatsoratra malagasy anehoana ny maha malagasy sy ny fampiasana ny teny malagasy any amin’aterneto sy blaogy ireny na dia mbola voasokajy vitsy aza izany.
Teny malagasy sy ny teknolojia
Misy ny karazana pejy maro samihafa any amin’ireo tambam-jotra serasera sy blaogy ireny manoro sy manitsy ny tsipelina ary ny fomba fanoratana ny teny malagasy. Ao ohatra ny vondrona Izany ka malagasy, izay sarotiny tokoa amin’ireo mpikambana ao aminy, amin’ny fampiasana sy fanoratana ny teny malagasy madiorano ao amin’ity vondrona ity
Ao ihany koa ny blaogin’i Voniary izay mizara voambolana mba hanentanana hatrany ny olona hampiasa ny teny malagasy. Fantatra ihany koa fa hisy ny tetik’asa any amin’ny aterineto, izay hanaovana horonampeo ho an’ny ankizy, izay karakarain’ny Blaogin’i Voniary hatrany ho fizarana sy fanehoana ny teny malagasy, toy ny karazan-kira izany.
Teny Gasy 2.0
Ny Teny Gasy 2.0 dia hetsika fampivondronana ny mpampiasa aterineto mivohy ny teny malagasy. Araka ny fantatra dia santatra ambavarano izany hetsika izany ity notanterahina omaly tao amin’ny IKM ity, izay niarahana tamin’i Daniel Andriamahazo (Rainibozy), ny vondrona Izany ka malagasy, Wikipedia, ny Serasera.org, ary Pôetawebs, izay nahitana loabarindasy.
Nisy ihany koa ny varotra fampirantiana nandritra ny hetsika ary atrikasa maro samihafa. Voalaza koa fa mbola hisy ny andiany manaraka ary vina hapetraky ny mpikarakara sahady ny fanokafana tranokala ifarimbonan’ny teny malagasy ary iantsoana ny olona rehetra izay vonona hanoratra amin’ny teny malagasy.
Fa nisy hoy ny mpikarakara ity hetsika ity ny fifaninanana fanoratanana lahatsoratra tamin’ny blaogy izay nahitana mpandray anjara maro nanentana ny olona hahafantatra ny fanoratana ny teny malagasy sy ireo lahatsoratra any anaty blaogy izany. Hotohizana hatrany ny ezaka efa natao ary tsy hijanona izany, hoy hatrany ny mpikarakara ny hetsika.